I-La Casita Violeta, indlwana enhle. - I-Airbnb
I-La Casita Violeta, indlwana enhle.
Navalespino, Comunidad de Madrid, i-Spain
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Ignacio
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Ignacio izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
Siyakwamukela endaweni yethu yokuhlala enkabeni yentaba, imizuzu engu-50 ukusuka e-Madrid nemizuzu engu-15 kuphela ukusuka e-San Lorenzo de El Escorial, eduze ne-Pinares yase-Greece.
Indlwana enhle lapho ungasusa khona isiphithiphithi nomsindo wedolobha, umsebenzi, nokucindezeleka.
Isimo esifudumele nesithokomele kuyoba yinto yokuqala ozoyithola endlini ye-viwagen; kodwa into emangalisayo ngempela indawo ezungezile nakho konke ongakwenza kuyo: ukuhamba ngezinyawo, ukudoba, ukuthatha zonke izinhlobo zamakhowe, izilwane ezimangalisayo, njenge-Graellsia
Yindlu yasemapulazini enhle, eyakhiwe ngamatshe nezinkuni, elungiswe ngokuphelele ngezinto zekhwalithi futhi yafakwa emininingwaneni yokugcina ukuze uhlale ngokunethezeka futhi uthokomale. Inendawo yokubasa umlilo, i-air conditioning, i-patio enhle nendawo yokosa inyama ukuze uyisebenzise ngokunenzuzo inkathi yonyaka ngayinye.
I-Navalespino yidolobhana elihle lasemaphandleni elizokuvumela ukuba ubuyele emuva ngesikhathi. Imibono iyasivakashela ibingacabangi ukuthi ingase ibe ngeye-Madrid, ngoba sinamahhashi axega emigwaqweni nama-eagi asebukhosini endiza phezu kwesibhakabhaka sethu.
Ngihlezi ngitholakalela ocingweni futhi khona lapho kukhona u-Almudena, umuntu omuhle ongisiza ukuba ngilawule izindlu nganoma yisiphi isidingo esivelayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Navalespino namaphethelo